Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia? | Ukuhamba kwe-Absolut
Luis Martinez | 20/04/2021 09:30 | Kubuyekezwe ku- 20/04/2021 10:31 | Australia
Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia? Lo mbuzo uyivelakancane ngaphandle kwemibuthano yezomnotho ekhethekile. Lokhu kuthonywa iqiniso lokuthi izwe lasolwandle libukeka likude kakhulu kithina futhi sazi okuncane ngalo.
Noma kunjalo, kufanele wazi ukuthi i-Australia ine- ukuqasha umuntu ngamunye ephakeme kunaleyo yaseJalimane, i-United Kingdom neFrance. Ngaphezu kwalokho, iba sesibili, ngemuva ENorway, ku Inkomba Yentuthuko Yabantu nendawo yesithupha kuleyo ye ikhwalithi yokuphila elungiselelwe yilo magazini 'Usomnotho'. Kukho konke lokhu, ukwazi ukuthi yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia kubalulekile ezweni lanamuhla lomhlaba jikelele.
1 Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia? Ukusuka ezimayini kuya emabhange kuya ekunakekelweni kwezempilo
1.3 Iqembu leRio Tinto
1.4 Iqembu leWoolworths
1.5 I-Westpac Banking Corporation
1.7 I-Westfarmers, umthengisi phakathi kwezinkampani ezinkulu zase-Australia
1.8 I-Telstra Corporation Limited
1.9 ITransurban Group
1.10 I-Amcor Limited, ukupakisha ukudala enye yezinkampani ezinkulu zase-Australia
Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia? Ukusuka ezimayini kuya emabhange kuya ekunakekelweni kwezempilo
Izinkampani ezinkulu kunazo zonke zase-Australia zithatha imikhakha eyahlukene yezomnotho, kepha zonke zihlanganyela amandla amakhulu emikhakheni yazo yokusebenza. Sizokukhombisa ezinye zalezi zinkampani.
Kuzo enye yezinkampani ezinkulu zezimayini emhlabeni. Izalwe ngo-2001 kusukela ekuhlanganisweni kweBrithani Ibhiliyoni nowase-Australia Umnikazi Wentaba Ephukile. Indlunkulu yayo ikhona Melbourne, kepha inezithunywa emazweni angamashumi amabili nanhlanu, lapho ikhipha khona amaminerali afana nensimbi, idayimane, i-nickel ngisho ne-bauxite.
Ngonyaka odlule imemezele imali engenayo ebiseduze I-46 idola elilodwa lamabhiliyoni, ngenzuzo ecishe ibe ngaphansi kwengxenye, cishe ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-20.
Igatsha leCommonwealth Bank yase-Australia
Njengoba ukwazi ukubona egameni layo, yibhange elisebenza, hhayi ezweni lasolwandle kuphela, kodwa nakubo bonke abanye abasendaweni, kanye nase Asia ngisho naku- United States y I-Gran Bretaña.
Emncintiswaneni onzima nelinye ibhange elikhulu ezweni, i Izwe lase-Australia, ICommonwealth inkulu kunalokho ngofeleba. Ngonyaka odlule umemezele imali engenayo ebiseduze 30 billion wamadola ase-Australia, okungukuthi, cishe ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-45.
Iqembu leRio Tinto
Sibuyela emisebenzini yezimayini ukukutshela ngale nkampani ebuye ibe phakathi kwezinkampani ezinkulu zase-Australia. Indlunkulu yayo iseseLondon, kepha yazalwa ngokuhlangana kwabaseBrithani I-Rio Tinto-Zinc Corporation, nezimayini eSpain, nase-Australia I-Conzinc Rio Tinto.
Es inkampani yezimayini yamalahle enkulu kunazo zonke emhlabeni futhi eminyakeni embalwa edlule izamile ukuthengwa yi-BHP Billion, esisanda kukutshela ngayo. Noma kunjalo, umsebenzi awuphothulwanga. Ngo-2020, iRío Tinto Group ibike imali engenayo cishe US $ 45 billion.
Iphatha enye yezindawo zokuqala ekuhlukanisweni kwezinkampani ze i-biotechnology. Izindawo zalo zokukhiqiza zifaka imishanguzo yokugoma, namuhla, kodwa nemikhiqizo etholakala kwi-plasma nokunye ukuvuselelwa kwamaseli. Yadalwa ngo-1916 nguhulumeni wase-Australia uqobo, kepha yanikezelwa ngo-1994.
Kuqashwe abantu abangu-25 000 kanti ngonyaka odlule kube nemali engenayo ye- cishe amadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10 okucishe kube izinkulungwane ezimbili kwaba yinzuzo. Mayelana nosonhlamvukazi bayo bemakethe, inenani lamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-145.
Ihhovisi Lokubhanga laseWestpac
I-Westpac Banking Corporation
Nakulokhu kuvela ibhange kulolu hlu oluphendula okuyizinkampani ezinkulu kakhulu zase-Australia. Yaqalwa ngo-1817, I-Western Pacific (okusho ukuthi iWestpac) inikezelwe kumabhange wendabuko nawokuhweba nawomabhizinisi, ukuphathwa kwengcebo kanye nokubhanga kwezikhungo.
Futhi inamagatsha ku- I-New Zealand. Mayelana nenani lalo eliyinhloko emakethe, cishe cishe ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-90 e-Australia. Imali yakho yonke ngonyaka ka-2020 yayikhona cishe ama-22 billion kanti inzuzo yayicishe ibe yizigidigidi ezine zamadola ase-Australia. Ngokuqondene nabasebenzi bayo, inezinkulungwane ezingaba ngu-40.
Umsebenzi wale nkampani nawo uhlobene nokubhanga, yize kunjalo endabeni yayo izimali. Inobukhona emazweni angama-25 futhi inabasebenzi abangaphezu kwezinkulungwane eziyi-14. Ikona umphathi wezimpahla zengqalasizinda omkhulu kunabo bonke emhlabeni, njengoba ilawula cishe ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-495 kulolu hlobo lwempahla.
Imali yayo emakethe icishe ibe yizigidigidi ezingama-53 futhi, ngo-2020, yamemezela cishe amadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu enzuzo. Inamandla kakhulu le nkampani kangangokuba abezindaba base-Australia bayibize ngokuthi "iMillionaire Factory."
I-Westfarmers, umthengisi phakathi kwezinkampani ezinkulu zase-Australia
Ukube izinkampani ezedlule bezizinikele kwezokumbiwa phansi, ezamabhange kanye nezindaba zezempilo, lokhu kwenziwa ngu ukudayisa. Ngokuqondile, ithengisa imikhiqizo yamakhemikhali neyezimboni, umanyolo futhi, njengoba ithole iqembu leColes, nakho ukudla.
Isitolo esikhulu seColes Group, inkampani engaphansi kweWestfarmers
Isungulwe ngo-1914 njengenhlangano yokubambisana yabalimi, njengamanje iqasha abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu. Ngo-2020 ibinenzuzo ephelele ye- cishe amadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-31, ngenzuzo elinganiselwa cishe kwezimbili.
I-Telstra Corporation Limited
Lolu hlu okuyizinkampani ezinkulu kunazo zonke e-Australia alukwazanga ukulahleka, olunikezelwe ku ukuxhumana. Ngokuqondile, ithengisa ngocingo olungaguquguquki nolunamaselula, i-Intanethi bese ikhokha izinsizakalo zethelevishini. Kubaluleke kakhulu kulabo abasebenza ezweni lasolwandle, ngenzuzo yemakethe cishe yamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-45.
Ngo-2019 yayinabasebenzi ababalelwa ku-26 kanye nemali engenayo yonyaka zizungeze ama-30 billion dollars ngenzuzo ephelele cishe ecishe ibe yine.
I-Australia izwe elikhulu, elinamakhilomitha-skwele angaphezu kwezigidi eziyisikhombisa. Ngakho-ke, ngeke kukumangaze ukuthi inkampani ezinikele kuyo ukwakhiwa nokusebenza kwemigwaqo emikhulu Ingenye yezinkulu kakhulu ezweni.
Ngaphezu kwalokho, iTransurban nayo isebenza ku- Canada y United States. Usonhlamvukazi lwayo lwemakethe lucishe lube ngama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-43 futhi lwakhiwa ngo-1996. Njengamanje, inabasebenzi ababalelwa ku-1500 kanye nomholo ophelele zizungeze ama-3 billion dollars ngenzuzo ephelele yenkulungwane.
Isitolo Sezingcingo zeTelstra
I-Amcor Limited, ukupakisha ukudala enye yezinkampani ezinkulu zase-Australia
Le nkampani nayo izinikele ekuthuthweni, yize kuyiyona mkhakha wokupakisha. Itholakala emazweni angamashumi amane, kufaka phakathi España, futhi inenani lemakethe elicishe libe ngama- $ 27 billion. Inabasebenzi ababalelwa ku-35 kanye nomholo ophelele ka- cishe amadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10, ngenkathi inzuzo ephelele isizungeze izigidi eziyi-1500.
Ekuphetheni, uma ubuzibuza okuyizinkampani ezinkulu zase-AustraliaUsuvele ubonile ukuthi, ngokuyinhloko, ingemikhakha enjengezimayini, amabhange nezokuthutha. Kodwa-ke, ezinye izinkampani ezinkulu, njenge I-CLS limited, benza umsebenzi wokwenziwa kwemikhiqizo yokuhlanzeka noma, njenge IGoodman Group, emhlabeni webhizinisi lezezakhiwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia?
Usuku Lomama eRussia